> Resource> iTunes> Easy Ụzọ Mgbe iPad Ga-mmekọrịta na iTunes
Emekarị mgbe m jikọọ m iPad m laptọọpụ, iTunes ga-emepe na-akpaghị aka ma ọ bụ mgbe ụfọdụ, m na-emeghe aka na mgbe ahụ, m nwere ike mmekọrịta ọ bụla m chọrọ. Otú ọ dị, n'ihi na nke ikpeazụ izu mgbe ọ bụla m jikọọ ha ọnụ m iPad amalite odori kama syncing na mgbe m na-emeghe iTunes m iPad adịghị egosi.
Na-agbali ka mmekọrịta iPad na iTunes, ma ọ dịghị ihe na-eme? Ọ bụ a eluigwe na ala nsogbu na egwuregwu mgbagwoju anya ọtụtụ iPad ọrụ, dị ka i. N'agbanyeghị ihe mere na-eduga na iTunes mmekọrịta ọdịda, ị ga-chọrọ otú idozi ya. Ebe a, isiokwu a Aims na-enye gị ọtụtụ ụzọ dozie nsogbu na iPad agaghị mmekọrịta na iTunes.
Method 1. Kwụpụ gị iPad na nkwụnye n'ime ya eriri USB ọzọ
Method 2: Tọgharia rawụta mgbe syncing n'elu WiFi
Method 3. Update iTunes ka ọhụrụ version
Method 4. Re-ikike iTunes na kọmputa
Method 5. Reboot ma ọ bụ tọgharịa gị iPad
Method 6. Jiri a 3rd otu ngwá ọrụ
Ọnọdụ ahụ nwere ike etịbe, mgbe ị jikọọ gị iPad na kọmputa site na iji eriri USB na, na iPad otú na-ebubo, ma na kọmputa ike na-agụ ya dị ka ihe mpụga ike disk, ọ dịghịkwa gị iTunes. Mgbe a eme, i nwere ike dị ikwunye anya gị iPad na nkwụnye eriri USB na-eme ka njikọ nke ugboro abụọ. Ọ bụrụ na ọ ka na-ada ada na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịgbanwe ọzọ eriri USB na-agbalị ya ọzọ.
Mgbe ụfọdụ, o nwere ike ịbụ njikọ ikuku nke na-enye ịrị elu nke mmekọrịta ọdịda. Na ikpe dị ka nke a, ị nwere ike tọgharịa rawụta. Gbanyụọ ụzọ na-atụgharị ya na ọzọ.
Mgbe ị na-ahụ na ị na-apụghị mmekọrịta iPad na iTunes, ị ga-mma ego ma iTunes arụnyere bụ ọhụrụ otu. Bụrụ na ọ bụghị, biko imelite iTunes ka ọhụrụ otu. Mgbe ahụ, mmekọrịta gị na iPad ka iTunes ọzọ. Usoro a nwere ike idozi iTunes ma mee ka ọ na-arụ ọrụ nke ọma.
Mepee iTunes na pịa Store. Na ndọpụta ndepụta, pịa Deauthorize Nke a Computer ... na banye na Apple ID. Mgbe deauthorizing zuru ezu, pịa ikikere nke a Computer ... ka reauthorize ya ọzọ. Ma ọ bụ, na-aga ma na-achọta ọzọ na kọmputa. Ikike ọzọ na kọmputa na-agbalị ya ọzọ. Nke a nwere ike na-arụ ọrụ.
Ọ bụrụ na gị iPad agaghị mmekọrịta na iTunes, ị nwekwara ike na-agbalị mechie gị iPad na reboot ya. Mgbe ahụ, mmekọrịta iPad na iTunes. Mgbe ụfọdụ, a pụrụ ime ka iTunes azụ arụ ọrụ kwesịrị. Ọ bụrụ na ọ bụghị, i nwekwara ike gbalịa resetting gị iPad. M nwere ikwu resetting gị iPad nwere ike iri gị iPad n'okpuru ize ndụ, n'ihi na ị ga-atụfu niile data na ya. N'ihi ya, jide n'aka na ị nwere azụ elu niile data on iPad tupu resetting.
Method 6. Iji a 3rd otu ngwá ọrụ
Mgbe iTunes agaghị mmekọrịta iPad, i nwere ike ịgbalị ihe dị iche iche. Naa, E nwere ọtụtụ iTunes ọzọ ngwaọrụ na ike mmekọrịta data ka iPad. Ebe a, m nwere ike ikwu na ị na a pụrụ ịdabere na otu - na Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Ma nsụgharị na-enye aka mgbe ị na-mmekọrịta data site na kọmputa na-iPad, na Anglịkan.
Download na wụnye ngwá ọrụ a na-agbalị ya onwe gị. Họrọ nri version na bụ dakọtara na kọmputa gị. Ebe a, na-ahapụ 'na-agbalị Windows version.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPad na ẹkedori ngwá ọrụ a
Na kọmputa jikọọ gị iPad site ịkwụnye a eriri USB na-abịa iPad. Mgbe ịgụ isiokwu gị iPad, ngwá ọrụ a ga-egosipụta ya na isi window.
Nzọụkwụ 2. mmekọrịta iPad na iTunes
Gaa Detuo iDevice ka iTunes, akpa button emi odude ke ala akara. A obere window-abịa si. Site na ịpị Malite, ị na-ọzọ window. Dị nnọọ ego faịlụ na ị chọrọ ka mmekọrịta. Mgbe ahụ, pịa Detuo na iTunes. The Nyefee ga-ngwa ngwa na ike. Jide n'aka gị iPad ga Akwụpụla n'oge dum.
Gịnị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka mmekọrịta faịlụ site na kọmputa gị iPad na Anglịkan? Bịa ekpe kọlụm. Karị, pịa Media, Ndetuta egwu ọkpụkpọ, Photos, Ndi ana-akpo na SMS (SMS naanị ike exported). Ha management window, pịa Tinye ma ọ bụ Import / Export ka mmekọrịta faịlụ gị iPad, na pịa Mbupụ na ma ọ bụ Import / Export ka mmekọrịta iPad faịlụ ka kọmputa.
Cheta na: The Windows version-ahapụ gị mmekọrịta ọzọ faịlụ gụnyere photos, kọntaktị, na SMS karịa Mac version na-eme.
Na-eme iTunes ndabere Ndi ana-akpo?